Beddel iimaylka Instagram-ka - VidaBytes | LifeBytes
Beddel iimaylka Instagram
Encarni Arcoya | 31/05/2022 08:28 | Tababarada
Marar badan waxaan ku abuurnaa bogga bulshada ee iimaylka oo aan hadhow joojinay isticmaalkiisa. Dhibaatadu waxay tahay, haddii shabakada bulshadu leedahay kaliya iimaylkaas, ma heli doontid ogaysiisyada, sidoo kale waxaad kala kulmi doontaa dhibaato la xidhiidh haddii aad u baahato. Sababtan awgeed, waxaanu diiradda saari doonaa shabakada oo ku weydiin doonaa: ma taqaanaa sida loo beddelo emailka Instagram?
Waxa laga yaabaa in aad xiisaynaysay oo aad garanaysay meesha aad samayn lahayd, laakiin waxa laga yaabaa in ay dhacdo in aanad wax fikrad ah u lahayn sida loo sameeyo. Ha werwerin, hadda waanu ku caawinaynaa.
1 Maxay tahay sababta u beddeleysa iimaylka Instagram
2 Sida loo beddelo iimaylka Instagram ka app-ka
3 Ku beddel emailka Instagram kombayutarka
4 Beddel emailka Instagram adigoon galin xisaabta
Maxay tahay sababta u beddeleysa iimaylka Instagram
Waxaa jira sababo badan oo aad u rabto inaad bedesho emailka Instagram.. Waxay noqon kartaa sababtoo ah xisaabtaada iimaylka ayaa la jabsaday, sababtoo ah waxaad illowday eraygaaga sirta ah, sababtoo ah ma isticmaaleysid Instagram.
Dhibaatadu waxay tahay, wixii ka dambeeya markaan is-diiwaangelinay, qaar badani ma garanayaan sida saxda ah tillaabooyinka la qaadayo si loo beddelo. Tanina waa wax aan isku dayeyno inaan bedelno.
Sida loo beddelo iimaylka Instagram ka app-ka
Sidaad ogtahay, Instagram hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka soo gasho arjiga mobilada (kaas oo ah kan ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan), ama kombiyuutarka. Midda dambe wax walba aad bay u xaddidan yihiin, laakiin waxaan kuu oggolaan lahaa inaad beddesho. Haddaba, aynu tallaabo-tallaabo u qaadno.
Halkan waa inaad haysataa tilmaamaha si aad uga bedesho app. Maxaa lagaa rabaa?
Marka hore, Instagram ka fur moobilkaaga. Marka la furo, aad profile kaaga. Marka gudaha loo galo, raadi ikhtiyaarka "Edit profile"..
Haddaad u fiirsato, iimaylkaagu wuxuu ka muuqan doonaa Macluumaadka Profile. Haddii aysan soo bixin, markaas waa inaad gelisaa Xulashada Xiriirinta waana inay halkaas ka muuqataa.
Haddii ay dhacdo in aad adiguna waxba helin, dabadeed dhagsii goobaha macluumaadka shakhsi ahaaneed. Iimaylka aad ku diiwaan gashatay akoontada ayaa halkaa ka muuqan doona. Waxa aan rabno in aan sameyno waa in aan bedelno. Sidee?
Guji ciwaanka iimaylka. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad tirtirto iimaylka aad ku jirtay oo aad geliso midka cusub ee aad rabto. Markaad haysato, taabo garka sare ee midig si aad u aqbasho isbeddelka.
Instagram ayaa kuu soo diri doonta iimayl iimaylka cusub si ay u xaqiijiso inaad runtii rabto akoonkaas hadda, marka waa inaad bixisa isku xirka sababtoo ah, haddii aadan xaqiijin, ma awoodid inaad ku gasho emailkaas.
Ku beddel emailka Instagram kombayutarka
Haddii aad ka mid tahay kuwa doorbida inay tan ku sameeyaan kumbuyuutarka, ogow inaad sidoo kale samayn karto. Iyo waliba si fudud. Dhab ahaantii, waa in la raaco tillaabooyinka aan horay u soo sheegnay, laakiin kiiskan laga bilaabo kombiyuutarka. Kuwaas oo kala ah:
Geli akoonkaaga Instagram kombayutarka.
Tag boggaaga guud.
Ku dhufo profile edit.
Xog taxane ah ayaa soo bixi doonta sida website-ka, taariikh nololeedka, jinsiga… iyo iimaylka.
Guji meesha ay ku taal, tirtir oo ku dar cusub.
ku dhufo dir.
Instragram ayaa kuu soo diri doonta emayl si aad u xaqiijiso isbeddelka oo markaad sameyso, habka oo dhan waa la samayn doonaa.
Beddel emailka Instagram adigoon galin xisaabta
Mid ka mid ah tabaha uu Instagram leeyahay waa suurtogalnimada in la beddelo iimaylka adoon ku jirin xisaabta. Tani waxay dhici kartaa, tusaale ahaan, sababtoo ah waxaa kaa lumay moobilkaaga, ama sababtoo ah waxaad leedahay akoonno kale oo aadan rabin ama aadan isticmaali karin midkaas.
Haddii ay kugu dhacdo, tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo ku bilow inaad furto app-ka Instagram. Haddii aad eegto, marka ay ku weyddiisato xogta gelitaankaaga, wuxuu ku siinayaa fursad aad ku hesho caawimo, hoosta badhanka bilowga. Halkan guji
Hadda, Waxay ku waydiin doontaa iimaylkaaga, lambarka taleefankaaga, ama magacaaga isticmaale. ee xisaabta Instagram oo aad rabto inaad u bedesho iimaylka.
Waxay ku siin doontaa dhawr doorashoHel iimayl (accountka ku xidhan), fariin qoraal ah (SMS), ama ka bilow Facebook. Iyada oo ku xidhan waxa aad doorato, waxa ay noqon doontaa wax ka badan ama ka yar.
Waxaad geli doontaa shaashad cusub oo aad ka beddeli karto erayga sirta ah iyo, daqiiqad la siiyay, waxay ku tusi doontaa iimaylka ay hayso. Halkaas waa in aad ka tirtirto ka aad haysato oo aad geliso kaaga, iyo haddii uu sidoo kale noqon karo lambarkaaga telefoonka.
Markaad xaqiijiso wax walba waa laguu samayn doonaa.
Dhab ahaantii, waxa aad sameyso waa in Instagram ay u maleyneyso inaadan xasuusan karin erayga sirta ah, taasina waa sababta aad u sameyneyso habkan, laakiin dhab ahaantii ujeedadaadu waa inaad bedesho emailka adigoon gelin koontada. Laakin waxa ay noqon kartaa fikrad fiican hadii aanad wakhtigan geli karin akoonkaaga oo aad u baahantahay in aad si degdeg ah u badasho boostada.
Hadda oo aad taqaanid sida loo beddelo iimaylka Instagram, marka aad u baahato, waxaad ogaan doontaa tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Tababarada » Beddel iimaylka Instagram
ka fur facebook